प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस मिश्र संसदको कठघरामा ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस मिश्र संसदको कठघरामा !
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस ओमप्रकाश मिश्र विरुद्ध आज सुनुवाइ हुँदैछ । हिजो मिश्रविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्नेहरुसँग छलफल गरेको संसदीय सुनुाइ समितिले आज उजुरीबारे मिश्रसँग जवाफ माग्न लागेको हो । संसदीय सुनुवाइ समितिले मिश्रविरुद्ध परेका उजुरीको सुनुवाइका लागि बिहान ९ बजे बैठक बोलाएको छ ।
संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेपछि भदौ ७ मा बसेको परिषद् बैठकले मिश्रको नाम सिफारिस गरेको थियो । मिश्र सिफारिस भएसँगै सुनुवाइ समितिले उनीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो ।
मिश्रविरुद्ध सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा आफ्ना नातेदारको पक्षमा पर्ने गरी फैसला गरेको, फौजदारी अभियोग लागेका ४ जनालाई सफाइ दिएको लगायतका उजुरी परेका छन् । सुनुवाइपछि समितिले अनुमोदनसम्बन्धी निर्णय गर्नेछ । गत फागुन ३० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त भएपछि सर्वोच्च अदालत विगत ६ महिनादेखि कायममुकायमको भरमा चलिरहेको छ ।